Akụkọ kacha mma n'akụkọ ihe mere eme | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, akwụkwọ dị mkpirikpi, ọkachasị akụkọ dị mkpirikpi na akụkọ, enwetawo afọ ọhụụ ọhụụ maka netwọkụ mmekọrịta na oge nke ọdịnaya ozugbo chọtara ebe ọzọ. Echere na otu n'ime ụdị edemede nke narị afọ nke XNUMX, oge mgbe akụkọ ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ ruo mgbe edemede ahụ, ndị a akụkọ kacha mma ha na-akpọ anyị òkù ịchọgharị akụkọ ndị a dị nkenke ma dị iche na pụrụ iche.
1 Ihe omuma nke obara gi na snow, nke Gabriel García Márquez dere
2 El Aleph, nke Jorge Luis Borges dere
3 Axolotl, nke Julio Cortázar dere
4 Nsusu ọnụ, nke Antón Chekhov dere
5 Cinderella, nke Charles Perrault dere
6 Achọrọ Nwanyị, nke Charles Bukowski dere
7 Adrift, nke Horacio Quiroga dere
8 Otu Marguerite Yourcenar si zoputa Wang Fo
9 N'ebe akụkụ, nke Jhumpa Lahiri
Ihe omuma nke obara gi na snow, nke Gabriel García Márquez dere
Agụnyere na nchịkọta Twelve Pilgrim Tales nke e bipụtara na 1992, The Trace of Your Blood in the Snow na-enye ndị lụrụ di na nwunye abụọ malitere njem ezumike ha site na Spain gaa Paris. Agbanyeghị, ihe ụtọ mmekọahụ nke Nena Daconte nwetara, onye bụbu protagonist, nwere njikọ na ọbara nke akararị ya ka dị na Europe niile. Edere ya site na njedebe ikpeazụ nke na-akọwa ikike nke ọrụ ahụ, Akụkọ kacha mma nke Gabo na-akwado ezigbo ọrụ nke onye ode akwụkwọ Colombia maka obere akwụkwọ nke ụfọdụ n’ime nnukwu akwụkwọ akụkọ ya ga-esi na ya nweta.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Nsuso nke ọbara gị na snow gụnyere Akụkọ Ifo nke iri na abụọ ...Akụkọ ifo njem iri na abụọ »/]?
El Aleph, nke Jorge Luis Borges dere
Aleph (Oge a)
Borges bụ mgbe niile onye na-akọ akụkọ, onye na-eche echiche na onye ọkà ihe ọmụma nke ụwa nke ọ tụgharịrị n'ụzọ nke ya, n'ụzọ kachasị dị mma. N'ikwu ya otuto bu akuko ndi magburu onwe ha Funes, nke a na-echefu echefu, mkpọmkpọ ebe, Ndịda ma, karịsịa, The Aleph, akụkọ nke ga-enye aha ya kachasị ewu ewu nchịkọta akụkọ. E bipụtara na 1945, Aleph na-ekwu maka oge ebighi ebi, nyocha ahụ na-adịgide adịgide nke onye edemede na-achọpụta ebe ụwa niile na-ezukọ na okpuru ulo. Ọcha metaphysical amara.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Aleph (Oge a)Ndị Aleph "/]?
Axolotl, nke Julio Cortázar dere
Complete akụkọ m ...
Nna ukwu ewu dika Rayuela kamakwa site na nchịkọta akụkọ maka ọdịnihu, Cortázar nwere mmasị igwu egwu na duality nke obere ihe ndị ahụ, na nrọ nke ị na-amabeghị onye bụ onye nrọ ma ọ bụ nrọ. N'ihe banyere Axolotl, onye salamander nke Mexico nke onye edemede ahụ na-aga eleta kwa ụbọchị na Jardin des Plantes na Paris, onye edemede na-eme ka ihe atụ dị ka naanị ya dị ka ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ n'ụdị dị ọcha nke N'abalị na-eche ihu, ọzọ na obere akụkọ ya dị mkpirikpi.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Complete akụkọ m ...Akụkọ Julio Cortázar zuru ezu »/]?
Nsusu ọnụ, nke Antón Chekhov dere
Nsusu ọnụ na akụkọ ndị ọzọ ...
Chekhov dere ihe karịrị narị akụkọ isii, na-egosi na ọ bụ otu n’ime ndị a ma ama na-akọ akụkọ ihe mere eme. Onye akaebe banyere oyi Russia a nke akụkọ ya gbalịrị ịchọta nhụjuanya nke obi, Kiss, akụkọ na-enye aha otu akụkọ ọdịnala ya, bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma. Otu akụkọ nke onye ọhụụ ya, bụ Riabóvich, bụ onye ọrụ gọọmentị nke na-enweta nsusu ọnụ site n'aka nwanyị a na-amaghị ama n'oge oriri tii nke onye nwe ụlọ haziri. Dị ka ihe ijuanya dị ka ọ bụ kpokọtara. Pụrụ iche.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Nsusu ọnụ na akụkọ ndị ọzọ ...Nsusu ọnụ na akụkọ ndị ọzọ site n'aka Anton Chekhov »/]?
Cinderella, nke Charles Perrault dere
Cinderella: Onye ...
Ee, ndị Akụkọ Childrenmụaka ha nwere ike ịbụ ndị nnọchianya kachasị ama ama nke obere akwụkwọ anyị niile toro. Na mgbe anyị na-ele anya n'azụ Charles Perrault bụ, yana Gmụnna Grimm, onye kachasị mma akụkọ na-akọ banyere ụmụaka. Họrọ nke kachasị mma bụ ọrụ na-agaghị ekwe omume, ọ bụ ya mere anyị ji ahapụ Cinderella, akụkọ zuru ụwa ọnụ nke nwa agbọghọ ahụ nne nne ya na-erigbu ma hụ onye isi nrọ ya n'anya. Gụnyere n'ime nchịkọta Nne Goose Akụkọ E bipụtara na 1697, Cinderella bụkwa onye ama ama maka mmegharị Disney abụọ ewepụtara na 1950 na 2015 n'otu n'otu.
Kidsmụ gị ga-akpọ isiala nye Cinderella: Onye ...Njirimara nke nne ọgazị »/].
Achọrọ Nwanyị, nke Charles Bukowski dere
Nwanyị a chọrọ: 18...
Ọkachamara nke unyi n'ezie, onye edemede America a mụrụ na Germany nyere anyị ndepụta nke akụkọ site na ịhọrọ nke kachasị mma abụghị ọrụ dị mfe. Achọrọ nwanyị, akụkọ gụnyere na nchịkọta South nke No North bipụtara na 1973, ọ na-ekwu maka nchọta nke protagonist maka nwanyị zuru oke n'ụwa ọjọọ, nwoke na-aga obodo Los Angeles bụ onye rụrụ ọrụ dị oke mkpa na ọrụ onye edemede. Dị Oké Mkpa.
Ọ ga-amasị gị ịgụNwanyị a chọrọ: 18...Chọrọ nwanyị si Bukowski »/]?
Adrift, nke Horacio Quiroga dere
Akụkọ: 326 (Akwụkwọ ozi ...
Tụnyere ugboro ugboro na Edgar Allan Poe, ndị Uruguay Horacio Quiroga mepụtara ọrụ nke ọchịchịrị mara, ndị nke okike na-emegide mmadụ n'onwe ya. Otu ihe atụ nke nkwenkwe a bụ otu n'ime akụkọ kachasị mma ya, bụ Adrift, nke onye ọ bụla na-akwado ya, bụ Paulino, agwọ tara ya mgbe ọ na-aga obere obodo na Osimiri Paraná. Aha nke akụkọ ahụ n'onwe ya bụ, n'aka nke ya, ihe atụ kachasị mma maka njedebe dị egwu nke na-akọwa ọrụ nke onye edemede a dị egwu.
Ihe ndị a ga-amasị gị Akụkọ: 326 (Akwụkwọ ozi ...Akụkọ banyere Horacio Quiroga »/]?
Otu Marguerite Yourcenar si zoputa Wang Fo
Akụkọ gbasara Oriental / ...
Na 1947, onye Belgium na-ede egwuregwu Marguerite Yourcenar bipụtara Akụkọ banyere Oriental, otu akụkọ nke ahụ gbanwere akụkọ ifo dị iche iche nke ụwa, site na Hindu ruo Greek site na Chinese Otu esi azọpụta Wang Fo. Ọ bụ ezie na n'oge ahụ ụfọdụ ndị nkatọ depụtara akụkọ a dị ka nledo na-enweghị isi nke akụkọ akụkọ China, oge gaferela emeela ya okpueze dị ka otu n'ime akụkọ kachasị adọrọ mmasị na narị afọ nke XNUMX. Njem site na "ụzọ nke otu puku puku na iri puku agba" site na anya Wang Fó na onye na-eso ụzọ ya Ling nke na-ekpughe akụkụ nke akụkọ ntolite na nka China n'ụzọ dị ịtụnanya.
Gaa ụwa site na Akụkọ gbasara Oriental / ...Akụkọ Oriental site na Marguerite Yourcenar »/].
N'ebe akụkụ, nke Jhumpa Lahiri
Ala ọhụrụ ...
Lahiri, onye edemede nke Bengali Onye mmeri Pulitzer, abụrụla otu n'ime olu kachasị mma nke ndị India nọ n'ọgbọ ya, na-enye ụwa ọrụ dịka nchịkọta akụkọ ya nke iwu na-adịghị ahụkebe. N'ịbụ nke akụkọ asatọ mejupụtara, ọrụ e bipụtara na 2000 bụ nke mbido mbụ nke akụkọ onye ọ bụla na atọ nke mejupụtara akụkọ ịhụnanya Europe maka mmadụ abụọ sitere na Hindu, Hema na Kaushik. Ihunanya nke anyi matara na akuko nke ato, rue mmiri, ihe akaebe kacha mma nke igosiputa akuko di ike dika ihe ojoo ya.
Choputa Ala ọhụrụ ...Ala na-adịghị ahụkebe nke Jhumpa Lahiri »/].
Kedu akụkọ kachasị mma na akụkọ ntolite maka gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Akụkọ kachasị mma na akụkọ ntolite
Ana m atụ aro ka ị gbanwee aha ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na maka gị akụkọ ndị ị kpọtụrụ aha bụ akụkọ kachasị mma na akụkọ ntolite, mgbe ahụ ị nwere ọtụtụ ihe ị ga-agụ. Daalụ!
na yaqui dijo
Ogbenye, echere m na ha bụ naanị akwụkwọ dị n'ọbá akwụkwọ gị!
Naanị ma nke kacha mma amaghị
Zaghachi Kim Kardashian